RawTherapee 5.8 inouya nerutsigiro rweRAW muCR3 fomati uye zvimwe | Kubva kuLinux
Mavhiki mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yeRawTherapee 5.8 yakaziviswa, vhezheni iyo inouya nenhau shoma, asi chimwe chazvo chinoonekwa chakakosha pachikumbiro kubva RawTherapee 5.8 inosanganisira yekutanga rutsigiro rweRAW mifananidzo mune CR3 fomati inoshandiswa muCanon kamera, pamwe nedzimwe shanduko dzekuwedzera.
Kune avo vachiri kusaziva RawTherapee vanofanirwa kuziva kuti ichi chikumbiro icho inopa seti yezvishandiso kururamisa kubereka kwemavara, gadzirisa chena chiyero, kupenya uye kusiyanisa, pamwe nekungogadzira mufananidzo wekuwedzera uye ruzha kudzikisira mabasa.
2 Chii chitsva muRawTherapee 5.8?
3 Maitiro ekuisa iyo nyowani vhezheni yeRawTherapee 5.8 muLiux?
Chaizvoizvo zvigadziriso kumufananidzo zvinoshandiswa panguva yekutumira kunze. RawTherapee inogona kushanda neRAW mafaera kubva kudhijitari kamera, uye nemifananidzo mune yakajairwa fomati. Iyo kodhi yeprojekti yakanyorwa muC ++ uchishandisa GTK + uye ikagoverwa pasi peGPLv3 rezinesi.
Chii chitsva muRawTherapee 5.8?
Mune iyi vhezheni itsva kuiswa kweiyo nyowani chishandiso «Capture Sharpening» inomira, , que inokutendera iwe kuti uwane otomatiki ruzivo rwakarasika ne lens blur (kudzikisira). Capture Sharpening yakabatana nePost-Resize Sharpening inobvumira kune yakajeka uye yakajeka mhedzisiro.
Chimwe chinhu chitsva chinomira mushanduro iyi nyowani ndiyo kuiswa kwekutanga rutsigiro rweRAW mifananidzo mune CR3 fomati inoshandiswa muCanon kamera. Kusvika parizvino, zvinongogoneka kuburitsa mifananidzo kubva kumafaira eCR3, uye metadata haisati yatsigirwa parizvino, asi zvinotarisirwa kuti mushanduro dzekupedzisira chinhu ichi chichagadziridzwa mukushandisa.
Uyewo inotsigirwa rutsigiro rwemhando dzakasiyana dzemakamera inoratidzwa, kusanganisira makamera ane DCP mavara profiles ane maviri mwenje masosi uye machena mazinga, pamwe nekuita kwekuita kwemhando dzakasiyana maturu
Chekupedzisira zvinonzi izvozvi mune iyi nyowani vhezheni chinongedzo ne libtcmalloc.so iyo inouya neGoogle maturusi ekugadzirisa matambudziko uko glibc isingazodzore ndangariro kune inoshanda system.
Maitiro ekuisa iyo nyowani vhezheni yeRawTherapee 5.8 muLiux?
Kune avo vanofarira kugona kuwana iyi nyowani vhezheni yeRawTherapee 5.8 unogona kuwana iyi vhezheni itsva nekushanyira yavo yepamutemo webhusaiti kwaunogona kuwana akasiyana installers ekushandisa (Windows, Mac uye Linux).
Saka kune yedu nyaya "Linux" Tinogona kuwana iyi vhezheni nyowani nekukopa iyo AppImage yacho.
Muchiitiko cheavo vari vashandisi veUbuntu uye zvigadzirwa, ivo vanogona kusarudza kuwedzera repository kune yavo system uye iyo iyo ivo yavasingawani chete ivo vazvino vhezheni vhezheni asiwo kuvazivisa ivo nezve nyowani nyowani.
Kuti uwedzere repository, ingovhura terminal uye mairi unofanirwa kunyora unotevera kuraira:
Chekupedzisira, ivo vanongoisa iko kunyorera nekuita unotevera kuraira:
Kana vari avo vari vashandisi veArch Linux, Manjaro, Arco kana kumwe kugovera kunobva paArch Linux, kuiswa kweichi chishandiso kunogona kuitwa nekutaipa unotevera kuraira:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » RawTherapee 5.8 inosvika nerutsigiro rweRAW muCR3 fomati uye nezvimwe
eXtern OS: Iyo Distro yekuziva iro Ramangwana reGNU / Linux